अर्थतन्त्र [Economic] | Nepal's No.1 Co-operative News Portal | Page 18
Home अर्थतन्त्र [Economic] (Page 18)
रोपाइँ ३० प्रतिशतमात्र
काठमाडौं, २८ असार । असार महिना सकिनै लाग्दा अझै पनि काठमाडौँ दक्षिण भेगमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ हुन सकेको छैन । विगतका वर्षमा असारको अन्तिम सातासम्म ८० प्रतिशतसम्म […]
लगानीकर्तालाई पुँजी बजारप्रति आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण–आर्थिक सर्वेक्षण
काठमाडौँ, २७ असार । सीमित पुँजी बजारमा केही वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको प्रवेशले क्षेत्रगत जोखिम न्यूनीकरण गरी बढीभन्दा बढी लगानीकर्तालाई पुँजी बजारप्रति आकर्षित गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आर्थिक […]
सार्वजनिक संस्थाको आय २०.१७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वमित्वमा सञ्चालित ३७ सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय दुई खर्ब २३ अर्ब २६ करोड ३७ लाख पुगेको छ । व्यवस्थापिका –संसद्मा बिहिबार […]
भारतीय दुतावासको सहयोगमा क्याम्पस भवन
इलाम । भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा निर्मित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस भवनको नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले बुधबार उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत रायले नेपालको विकासका […]
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित रहने
काठमाडाै २६ असार । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.५ प्रतिशतले […]
नौ महिनामा नेपाल टेलिकमको आम्दानी उनान्तीस अर्ब
काठमाडौँ, २४ असार । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु २९ अर्ब १२ करोड ३४ लाख आर्जन गरेको छ । आर्जित रकममा कर कटाउँदा कम्पनीेलाई रु […]
तेह्र लाख घरपरिवारको लगत सङ्कलन
काठमाडौँ, २४ असार । गरिब घरपरिवार पहिचान, परिचयपत्र व्यवस्थापन र वितरण संयोजन बोर्डको सचिवालयले गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि १३ लाख घरपरिवारको लगत सङ्कलन गरेको छ । देशमा गरिबीको […]
काठमाडौं २२ असार । साना किसान विकास बैंक आइतबारदेखि १३ औं वर्षमा प्रवेस गरेको छ । २०७१ जेठ मसान्तसम्ममा बैंकले बैंकले ५५ जिललाका ६ सय गाउ विकास समितिका […]
लगानीमैत्री वातावरण नभए सम्म आर्थिक समृद्धि हुदैन : पाण्डे
काठमाडौं, २२ काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभए सम्म आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेशनलको तेस्रो वार्षिक उत्सवको […]
सहकारीमा नियमन वढाउनु पर्छ
मनोज आचार्य ‘खुरापाती हाकिम’ , हास्य कलाकार मनोज आचार्य हास्य कलाकारका रुपमा परिचित नाम हो । दर्जनौ नाटक, टेलिचलचित्र, फिल्ममा अभिनय गरेर लाखौमाझ चिनिएका उनी हाल नेपाल टेलिभिजनवाट […]
सहकारी अभियानमा राजनीतिक प्रभाव
मुलुकको सहकारी अभियान राजनीतिक प्रभावले ग्रस्त वनेको छ । अभियानले आधा सताव्दी पुरा गरिसकेपनि सोचे अनुसार विकास र विस्तार नहुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारक रहको देखिन्छ । यसै […]
‘कतैबाट पनि सहयोग भएन’
मोहन सिंह लामा, अध्यक्ष बखान सहकारी संस्था लिमिटेड एक वर्ष देखि विभिन्न मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी संग्राहलयको प्रपोजल पेश गरिरहेका छौं । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय स्थापना […]
‘सदस्य, संचालक र राज्य दोषी छन् ’
विमल श्रेष्ठ प्रबन्ध सञ्चालक गोफल पलाञ्चोक भगवती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. राज्यको नीति कमजोर भएका कारण पनि सहकारीमा समस्या देखिएको हो । राज्यका सञ्चालकहरु पनि जिम्मेवार […]
सदस्यले असल र खराब सहकारीको पहिचान गर्ने कसरी ?
अशोककुमार ढकुरीः सचिव यूनाइटेड गोर्खा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ सर्वप्रथम राज्यले सहकारीलाई प्राथमिकतामा नराख्नुनै यसक्षेत्रको दुर्भाग्य हो देखावटी मात्र छ व्यवहारमा चाही निचोरेर लिने मात्र हो । […]
सहकारी नियमावली ०४९ संसोधनका बारेमा के भन्छन् सहकारीकर्मी ?
अंकुश लगाउन खोजीयो श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक : सिभिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट, काठमाडौं सहकारी नियमावली संसोधन गरी सहकारीको निक्षेपलाई अंकुश लगाउन खोजिएको छ, कार्यकारी पदमा सञ्चालक बस्न नपाउने […]